Ukusuka kweli gumbi kuthi siqale rhoqo ekuseni, apha sizenza ngokwemiqathango emva komsebenzi womsebenzi onzima. Ngaloo ndlela, kuthi ukulungelelaniswa kwendawo yokuhlamba kubaluleke kakhulu. Enyanisweni, ngaba akunakukhathazeka ukuba kulungele njani ukuhlamba, ukuhlamba, ukunyamekela umntwana wethu?
Siqala phi izixhobo zokuhlambela, yintoni eza kudala kuyo intuthuzelo eyongezelelweyo kunye nentuthuzelo enkulu? Masiqale ngesitya sokuhlamba, mhlawumbi. Namhlanje, lo mkhuba uqhelekileyo xa ishalafu esinesibuko siphonywe kwisitya sokuhlamba ukugcina izinto zangasese. Kodwa ukuba ucinga uphinde ulinganise i-pros and cons, kuyakuba luncedo ngakumbi ukuqinisa isakhelo esikhethekileyo eludongeni. Ngomnyango wekhabhinethi evela ngaphandle, kufuneka uxhome isibuko, ubungakanani bomnyango. Ngoko ke ikhabhinethi iya kwenza imisebenzi emibini ngexesha elinye. Kuyo unako ukugcina zonke iifowuni zokuhlamba, ukucafa, ukunakekelwa kwesikhumba kunye neenwele. Kungenzeka ukuba loo ndawo idibeneyo iya kulungelelaniswa ngokupheleleyo kwiplani yefenitshala yendlu yokuhlambela kwaye ayiyi kuhlangabeza kuphela iimfuno zokusebenza, kodwa iyakwenza njengento efanelekileyo yokuhlobisa.
Ngaphantsi kwelabi, kunokwenzeka ukuxhoma iipalenta ezingenanzi ngamanzi kwiinconga zentsimbi encinci. Kwi-screen impromptu enjalo, iithalafu zokugcinwa kweeponji, iintlobo ezahlukahlukeneyo ze-powders kunye nezinye izitya ezikhethekileyo ziya kufumana lula.
Umfazi ongeyinyumbakazi oomama ngokuqhelekileyo ugcinwa kwibhokisi yeplastiki eneqhonqa. Iyakwazi ukuvumelanisa nokuhlobisa yonke imbala yokuhlamba.
Iiplantshi ezimbini okanye inkqubo yokuloba izithambiso kunye neengubo zibekwe ngokulandelanayo: kwisitya sokuhlambela - iitaliti, kunye nezambatho - kufuphi nomnyango. Ukuba ubukhulu bendawo yokuhlambela kukukhawulelani, ngoko unokulungelelanisa i-hanger yengubo ngqo ngaphakathi kwendlu. Kuya kuba yinto efanelekileyo kwaye efanelekileyo. Akunjalo, ukuba le nxalenye yokuhlambela ingumbala ofanayo kunye nebhokisi yokuhlamba kunye nezinye izixhobo.
Ukusebenzisa intonga yesinyithi, echanekileyo kunye neziphelo zayo ezimbini kwiindonga kwinqanaba le-outer edge of bathing, ufumana inkcazelo ebalulekileyo yendlu yokuhlambela - amakhethini okuhlamba. Xa uthengile la maphethini, zama ukukhetha ukomelele kakhulu, ngokukhethekileyo kumakhethini anokwakheka, njengoko amakhethini aqhelekileyo awanamandla, kodwa aphantsi kakhulu. Musa ukutshintshana kwintengo, kungcono ukuthenga ikhefu elibi kwaye kuya kukugqibela malunga nonyaka, kunokuba uthenge umncinci kwaye uphonsa ngaphandle kweveki.
Kwindlu yokuhlambela kufuneka ufumane, ngaphezu kwendawo yonke, kunye nokukhanya kwendawo. Ezinye iindlela zokucoca, ukucafa, ukunakekelwa kweenwele kubandakanya ukudala ulawulo olukhethekileyo lokukhanya. Kungcono ukubonelela iibhola ezimbalwa ezijikelezayo kwisibuko.
Kukho iintlobo ezininzi zokuhlamba:
1. Indawo yokulala egumbini lokulala. Phantse bonke abantu baphupha ngokuhlamba. Enye yezikhetho ezifikeleleke kwaye eziqhelekileyo kukufakela i-cubicle okanye isitya lokuhlambela kwigumbi lokulala. Ngokuqhelekileyo bahlukana ngoluhlu olunqamlekileyo lwenxenye. Olu hlobo lokuhlambela aluxhomekeke kuyo nayiphi na imithintelo yokusebenza. Iyakwazi ukuxhotyiswa nge-sauna, i-boudoir, kunye nokuzivocavoca - yonke into enokubangela ukuba i-bathrooms ibanjiswe ngamathuba amnandi kunye nemali.
2. Indlu yangasese ekliniki. Nangona abantwana bebancinci, abazali abazami ukungena kwindawo yokuhlambela ngokusuka kwii-nursery, kodwa beyithumela okwesikhashana kwikorori ukwenzela ukuba abazali bakwazi ukulawula ukunyakaza komntwana kwindlu. Isitya sokugcina abantwana sobukhulu obufanelekileyo sisetyenziswe njengexeshana. Xa umntwana ekhula, ngoko unokufumana ukungena okuhlukeneyo ukusuka kwigumbi lakhe kunye nokuphala kwamanzi kumntu omdala.
3. indlu yokuhlambela. Njengomthetho, ifowuni ayifuni ukuba isitya sokuhlambela ukufaka indlu yokuhlambela enkulu epheleleyo, nje i-cubicle ejwayelekile. Kuyinto enqwenelekayo ukuhlula indlu yangasese, ngelixa libonelela ngesitya sokuhlamba.
Umbala wepinki kumagumbi abantwana
Ziziphi izindonga zegumbi lokuhlala?
Isitayela seKekch ngaphakathi
Iipaki zeepakethi zamabhinqa ezisePermini: iimodeli ezikhoyo kakhulu zonyaka we-Spring-Summer 2016, ifoto
Ipopkin pie nesilili
I-Adnexitis: unyango kunye nezilwanyana zomntu
Ukusebenza okusebenzayo kwintambo yomntu
I-Shrimp kwi-coconut breading with ananaspa salsa
Ungonwabela njani ngesondo kunye nomnini wepenisi encinci?
Isobho se-mushroom cream kunye nama-mushroom
I-eyelash kunye neoli ye-eye
I-strawberry utshani cephalophora
Ama-sandwich kunye nenkukhu kunye neetamatato ezomileyo zelanga
Ziziphi iimveliso okufanele uzibeke kwiinkcenkceshe?
Amalungu aphilileyo, amathambo kunye nezihlunu